Umnikazi wesitolo udubule izigebengu enxanxatheleni yezitolo ePitoli | News24
Umnikazi wesitolo udubule izigebengu enxanxatheleni yezitolo ePitoli
Johannesburg - Kubikwa ukuthi kulimale umuntu oyedwa ngesikhathi kuqhuma isibhamu enxanxatheleni yezitolo iGrove ePitoli ngoLwesine.
Ngokusho kombiko weNews24, lokhu kuza ngemuva kwemizamo yokuphanga isitolo sobucwebe.
"Sithole umbiko othi umnikazi wesitolo nguye odubule ebhekise kubasolwa kanti sisola ukuthi lo olimele ungumsolwa kulesi sigameko," kusho okhulumela amaphoyisa uCaptain Daniel Mavimbela.
Bekuphihlike ingilazi ehlala ubucwebe kulesi sitolo kubonakala ukuthi isimo besimanzonzo.
UMavimbela uthe lezi zigebengu zibaleke nobucwebe, okungaqinisekiswanga ukuthi bebubungakanani.
OLUNYE UDABA:Kudume izulu lezandla izigebengu zibamba inkunzi isitolo sobucwebe
Imibiko yesigameko sokudubula iqinisekiswe ngabe-eNCA, kodwa ayikho eminye imininingwane evelile ngemuva kwalokho.